Calculata ahia ahia Forex | Okirikiri, Pip, Pivot na Position Calculator
Home / trading / Ngwaọrụ Forex / Calculators Forex
Ọnụ ọgụgụ nke Calculators Forex
Anyị emepewo ihe dị iche iche nke nchịkọta akụkọ nke ga - enyere ndị ahịa aka ịrụ ọrụ. Ejila nlezianya mepụtara onye nke ọ bụla na mkpa ndị ahịa na-ebute ụzọ mgbaru ọsọ anyị. N'ime nchịkọta a bụ: nhazi ụda nke ọnụ ọgụgụ, calculator ala, pips calculator, onye mgbakọ na-atụgharị na onye na-akwụ ụgwọ ego. Ọ dị oke mkpa na ndị ahịa na-amatakwa onwe ha na ọtụtụ n'ime ndị na-emepụta ihe ndị a, n'ihi na ha nwere ike inyere aka mmepe nke atụmatụ atụmatụ na atụmatụ, na-enwe ihe ize ndụ ma na-ebute ụzọ na atụmatụ ahụ. Ndị nchịkọta akụkọ a nwekwara ike inyere ndị ahịa aka izere njehie isi, dịka ọmụmaatụ; ihie ụzọ site na nchịkwa nke nanị otu mkpụrụokwu iri na ụba nwere ike ime ka ọnụọgụ ahụ baawanye.
Onye na-atụgharị ihe
Ngwá ọrụ bara uru iji chịkwaa mgbasa ozi gị na ahịa ọ bụla, nke a na-enye gị ohere ịkọwa mpaghara nke ị ga-achọ iji tinye ahia n'ahịa.
Ngalaba a chọrọ
atụ: ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa nke ego USD / USD, na ọnụahịa nke 1.04275, na 10,000 * nke ahịa, site na iji ntinye 1: 200 mgbe ahụ, ị ​​ga-achọ ịnweta $ 52.14 na akaụntụ gị iji kpuchie ya mgbasa.
* otu nza yiri nke 100,000 nkeji.
Ngwaọrụ a dị mfe ga-enyere ndị ahịa aka, karịsịa ndị ahịa novice, n'ịgbakọ pips ha maka ahia.
atụ: Anyị ga-eji anyị EUR / USD atụ ọzọ; ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ụzọ isi ego dị na USD / USD, na ọnụahịa nke 1.04275, na ụdị 10,000, mgbe ahụ, nke ahụ yiri otu pip. Ya mere, ị na-etinye ihe ọ bụla ị ga-etinye n'ihe ize ndụ.
Ọtụtụ nhazi ihu ahia ga-agbakwụnye ihe dị mkpa kwa ụbọchị, ndị ọrụ ngwá ahịa a nwere ike gbakọọ isi ihe ndị dị mkpa ha; ihe dị mkpa kwa ụbọchị, nguzogide na nkwado. Ị na-esetịnye ụbọchị ụbọchị dị elu, ọnụ ala na ụgwọ mmechi ọ bụla maka nchekwa. Onye nlele ahụ ga - ahụzi ihe dị iche iche dị mkpa. Ebe ndị a bụ isi ihe dị mkpa ebe ọtụtụ ndị ahịa ga-etinye onwe ha, ma eleghị anya n'ihe gbasara: ntinye, kwụsị ma were iwu iwu bara uru.
Onye na-atụle ọnọdụ
Ihe ọzọ dị mkpa maka ndị ọkachamara, ma ọ bụ ndị ahịa novice, onye nkata a dị oké mkpa maka ijikwa ihe ize ndụ gị na ahia ma lelee njedebe gị n'ozuzu.
atụ: Na-eji akara ọkọlọtọ EUR / USD. Ịchọrọ ka naanị 1% nke akaụntụ gị dị na ahia. Ịchọrọ ịkwụsị naanị 25 pips site na ọnụahịa dị ugbu a. I nwere nọmba akaụntụ nke $ 50,000, ya mere, ị ga-eji ọkwa nke nza abụọ. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ị ga - enwe ihe ize ndụ nke $ 500 na ahia ahụ, ọ bụrụ na ị kwụsị ọnwụ ka arụ ọrụ, nke a ga - abụ ụgwọ gị.
Eleghi anya ihe kachasị mfe na ịrụ ụka doro anya na ihe kachasị amara nke ngwá ahịa anyị, onye na-agbanwe ego na-enye ndị ahịa ohere ka ha weghaa ego ụlọ ha na ego ọzọ.
atụ: Ọ bụrụ na ịchọrọ iji tọghata € 10,000 ka $ 10,000 pụta bụ 10,437.21USD. Na ndabere na 1 EUR = 1.04372 USD na 1 USD = 0.958111 EUR.
A na-enweta ndị nchịkọta akụkọ a site n'aka ndị ahịa anyị maka ndị na-ahụ maka akaụntụ FXCC.